नक्कली बीमा गर्ने प्राइम लाइफका तीन कर्मचारी कारागार चलान
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको नक्कली बीमा गराई ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छ मध्ये तीनजना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक आदेशमा धरौटी..
दूरसञ्चार प्राधिकरणका दीगम्बर झाद्वारा राजीनामा
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्बर झाले राजीनामा दिएका छन्। बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई राजीनामा बुझाएको झाले जानकारी दिए। झाले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट नै..
६० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार अभियोगमा प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित १६ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी ढंगले एक व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा अर्काको नाममा पास गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख मालपोत अधिकृत कमलप्रसाद तिमल्सिनासहित १६ जनालाई विशेष अदालत..
खोटाङमा ट्याक्टर दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु, एक गम्भीर घाइते
खोटाङ । ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा खोटाङमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् । दिक्तेलबाट निर्मलीडाँडातर्फ जाँदै गरेको को२त ५६६० नंको ट्याक्टर आज बिहान करीब..
दाङ बस दुर्घटना : भविश्यको सपना बोकेर आएका, लाश बनेर फर्किए (मृतक र घाइतेको नामसहित)
तुलसीपुर । राप्तीराज मार्ग अन्र्तगत दाङ तुलसीपुर उपहानगरपालिका वडा नम्वर ३ राम्रीमा भएको बस दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका २३ जनाको सनाखत भएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार दाङका ६..
अपडेटः दाङ दुर्घटनाका २३ मृतक मध्ये १४ को सनाखत (नामावलीसहित)
बुटवल । हिजो साँझ दाङमा भएको बस दुर्घटनाका मृतक २३ मध्ये १४ जनाको सनाखत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ । सनाखत भएकामध्ये जुम्लाका पाँच जना र दाङ्गका ५ जना ..
पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीले अन्यायमा परेको भन्दै दिइन् सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले दाइजोमा पाएको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाममा हुने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले गरेको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। आफ्नो मुद्दालाई..
दाङ दुर्घटना अपडेटः मृतकको संख्या २१ पुग्यो (घाइतेको नामावलीसहित)
दाङ । सल्यानको कपुरकोटबाट तुलसीपुरतर्फ आउँदै गरेको बा४ख ९७६६ नम्बरको बस तुलसीपुर–सल्यान सडकखण्डको तुलसीपुर– ३ राम्रीमा दुर्घटना हुँदा तीन महिलासहित २१ जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकको सनाखत हुन बाँकी छ..
दाङमा शैक्षिक भ्रमणमा गएको बस दुर्घटना, १६ जनाको मृत्यु
तुल्सीपुर । सल्याङबाट दाङको तुलसीपुर आउँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या १६ पुगेको छ । दुर्घटनामा परी ११ जना घाइते भएका छन् । प्रहरी सहायक निरीक्षक विष्णु श्रेष्ठका अनुसार..
कांग्रेसमा अब सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, सात सहमहामन्त्री सबै निर्वाचित हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले विधानमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र सात सहमहामन्त्री राख्ने गरी सहमति गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच शुक्रबार भएको सहमतिअनुसार..
पूर्व गभर्नर तिलक रावल सहित ३ जना विरुद्ध २ करोड ९३ लाख रुपैंयाको भ्रष्टाचार मुद्धा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व गभर्नर तिलक रावलका साथै तत्कालिन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र स्थानीय प्रतिनिधि हिमालयबहादुर पाँडे बिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ । १०..
कृषि विकास बैंकका कर्मचारी गोविन्द प्रसाद जोशीले सफाइ पाए
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकका कर्मचारी गोविन्द प्रसाद जोशीले सफाइ पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार जोशीलाई सफाइ दिएको हो । झुठा विवरण एवं कागजातका आधारमा कर्जा लिनु दिनु गरि भ्रष्टाचार..
जब उपहारको पोको बोकेर अस्पताल पुगे ओबामा
काठमाडौं । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले बासिंटन डीसीस्थित चिल्ड्रेन्स नेशनल अस्पताल पुगेर क्रिसमसको अवसरमा बालबालिकालाई उपहार बाँडेका छन्। सान्ता क्लजले लगाउने शीरमा रातो फ्लपी टोपी र काँधमा उपहारको पोको बोकेर उनी..
इन्धन सुविधाको नाममा मन्त्रीहरुले मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट नगद र मन्त्रालयबाट तेल लिई गरे भ्रष्टाचार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’को नारा दोहोर्‍याइरहेका छन् । तर, उनी नेतृत्वका २४ मध्ये २३ मन्त्री र राज्यमन्त्रीले इन्धनमा समेत भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक..
बाटोमा भेटेको नागरिकताबाट ६८ करोड ठगी कसरी ? रहस्य खुल्दा नागरिकता धनी अचम्मित
काठमाडौं । बाटोमा भेट्टाएको नागरिकताबाट एक व्यक्तिले ६८ करोड रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ठगीमा संलग्न विजयनारायण श्रेष्ठलगायत चारजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । बाटोमा..
पूर्वप्रधानमन्त्री डा तुलसी गिरीको निधन
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ डा तुलसी गिरीको मंगलबार बिहान निधन भएको छ । आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठ भिल्लामा ९३ वर्षीय गिरीको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दियो । राजाको प्रत्यक्ष शासनका..
मेलम्ची अलपत्र पारेर भाग्न खोज्ने ठेकेदार र कर्मचारी नियन्त्रणमा, पासपोर्ट जफत
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षीय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य अलपत्र पारेर भाग्न खोज्ने इटालियन ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि र कर्मचारीलाई खानेपानी मन्त्रालयले नियन्त्रणमा लिएको छ । काम छाडेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेको सूचनामा आधारमा..
मन्दिरको प्रसाद खाँदा ११ को मृत्यु, ७० बिरामी
काठमाडौं । भारतको कर्नाटकमा मन्दिरको प्रसाद खाँदा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । करिब ७० जना बिरामी परेका छन् । कर्नाटकको चामराजनगर जिल्लास्थित सुलाबाडी गाउँको किच्चुकुट्टी मारम्मा मन्दिरको प्रसाद खाँदा..
काठमाडौं । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा मिनिट्रक दुर्घटना हुँदा १६ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार दिउँसो शिखरबेशीबाट घ्याङफेदीतर्फ जाँदै गरेको मिनीट्रक दुर्घटना हुँदा १६ जनाको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी..
काठमाडौं । सरकारले साना किसानहरूको ऋण मिनाहा गरिदिएको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बिहीवार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यस्तो जानकारी गरएका हुन् । साना किसानहरूले कृषि..
चेलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वसम्मत सिफारिस
काठमाडौँ । संवैधानिक परिषदले न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । आज बसेको परिषद बैठकले राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सर्वसम्मत निर्णयसहित सिफारिस गरेको परिषद सदस्य तथा राष्ट्रिय..
जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका ११ नेताले १३ थान हतियार बुझाउँदै आत्मसमर्पण गरे
राजविराज । मधेसमा भूमिगत जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा क्रान्तिकारीका नेताहरु बुधबार राजनीतिक वार्ता टोलीसमक्ष १३ थान हतियार बुझाउँदै आत्मसमर्पण गरेका छन् । १५ सदस्यीय समितिमध्ये ११ जनाले पत्रकार,..
काठमाडौ । प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको राजधानी तत्काल नतोकिने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबले बुधवार राजधानीमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मुख्यमन्त्री पौडेलले अहिले नयाँ स्थानमा राजधानी तोक्दा भौतिक..
विदेशीक राजगारीबाट फर्किएका १ हजारले ऋणका लागि आवेदन दिए, १० लाखसम्म सरल कर्जा कसरी पाइन्छ ?
काठमाडौँ। विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सरल कर्जा कार्यक्रमप्रति युवाको आकर्षण बढेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विशेष ज्ञान, सीप र दक्षता आर्जन गरेर नेपाल फर्की पेशा,..
५३० जना कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस
काठमाडौं– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समय पालना नगर्ने ५३० जना कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले साउनयता १४० वटा कार्यालयमा गरेको अनुगमन ठीक समयमा कार्यालयमा नआउने ३१८ र तोकिएको पोशाक..
काठमाडौं । बाँकेको विकट नरैनापुर गाउँपालिका–१ मतनियाँका नुर मोहम्मद खाँ (५१) ले एकै दिन तीन पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका छन्। देशभरि महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलेकै दिन ९ मंसिरमा खाँले..
मंसिर २५ र २६ गते दुई दिन सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । प्रदेश २ मा विवाह पञ्चमीका अवसरमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले मङ्सिर २५ र २६ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकोे छ । विवाहपञ्चमी..
प्रहरी र भारतीय डाँकाबीच गोली हानाहान, एक डाँकाको मृत्यु
सुनसरी । जिल्लाको कोशी गाउँपालिका–७ स्थित मुसहरि टोल नजिक गएराति प्रहरी र भारतीय डाँका समूहबीच गोली हानाहान हुँदा एक भारतीय डाँकाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट चोरी डकैती..
सर्वोच्चका न्यायाधीश पत्नीको आरोप : बच्चा माग्दा म हिरासतमा पुग्नु पर्यो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतकी श्रीमती ललिता कुमारी राउतले आफू श्रीमानबाट अन्यायमा परेको दाबी गरेकी छन् । राउतले शनिबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरेर श्रीमानबाट अन्याय खेप्नुपरेको..
नेकपाका चार नेताले किन गरे सचिवालय बैठक बहिस्कार ?
काठमाडौ । शनिबार बस्ने भनिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक चार नेताले बहिस्कार गरेका छन् । दिउँसो ३ बजेको लागि बैठक बोलाइएको थियो । निर्धारित समयमा बैठक बस्नका लागि पुगे..
Results 1994: You are at page 19 of 67